Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo ogolaaday in ciidamo Maraykan ah dalalkooda la keeno • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo ogolaaday in ciidamo Maraykan ah dalalkooda la keeno
May 18, 2019 - By: Khalid Yusuf
Warbaahinta Sacuudiga ayaa shaacisay in Boqortooyada dalkaasi iyo wadamada xulafada la ah ay ogolaadeen in wadankooda la keeno ciidamo Maraykan ah si looga hortago weerar uga yimaada dalka Iran.
Heshiisyada dhexmaray Xulafada Sacuudiga iyo Maraykanka ayaa kusoo beegmaya xili ay dalalkaasi sare u qaadeen cadaadiska ay ku hayaan dowlada Iran oo iyadu sheegtay inaysan diyaar u ahayn dagaal.
Maraykanka oo horey saldhigyo militari ugu lahaan jiray Sacuudiga ayaa halkaasi ciidamadiisa kala baxay sanadkii 2003, walow ay dalkaasi weli u joogaan koox tababarayaal ah oo gacan siiya militariga Sacuudiga.
Dalalka Khaliijka oo u arka Iran iyo kooxaha ay taageerto kuwo khatar ku ah amnigooda ayaa wada hada qorshaha xeryo cusub dalalkooda looga sameenayo ciidamada Maraykanka oo horey saldhigyo ku lahaa qaar kamid ah dalalkaasi.
Maraykanka ayaa horaantii todobaadkan qaar kamid ah diblumaasiyiintiisa kala baxay Safaarada uu ku leeyahay magaalada Baqdaad xili ay sii xumaaneyso xiisada ka taagan gobalka ee u dhaxeysa Maraykanka iyo Iran. Dalka Ciraaq ayaa kamid ah wadamada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka la sheego inay ka amar qaataan Iran.
Go’aanka Maraykanka diblumaasiyiintiisa Ciraaq uu kula baxay ayaa yimid kadib markii Axadii hore la sheegay in weeraro lagu qaaday afar markab oo laga kala lahaa dalalka Sacuudiga, Imaaraatiga iyo Norway oo marayey xeebta dalka Imaaraadka.
Waxaan weli aan la shaacin cida ka danbeysay weeraradaasi la sheegay in lagu doonayey in lagu dajiyo maraakiibta shidaalka qaada, inkastoo weeraradaasi la sheegay inaysan ka dhalan wax khasaaro ah marka laga reebo dhaawacyo kooban oo gaaray Maraakiibtaasi.
Xulafada Israel ee awooda ku dhexleh dowlada Maraykanka sida John Bolton la taliyaha Amniga ee Madaxweynaha Maraykanka ayaa si weyn ugu ololeenaya in weerar militari lagu qaado dalka Iran, arrintaasi oo ay sidoo kale taageersan yihiin Sacuudiga iyo Imaaraatiga.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Iran Java Zarif ayaa sheegay in kooxda ay u bixiyeen B- Team oo kala ah (Bolton, Benjamin, Bin Salman iyo Bin Zayid) ay doonayaan inay abuuraan xaalad dagaal oo ku khasbeysa Donald Trump inuu lugaha la galo dagaal khasaaro badan ka dhasha.
Xiisadan ayaa kasoo bilaabatay kadib markii sanadkii tagay uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii Iran la gashay Beesha Caalamka ee la saxiixay sanadkii 2015, kaasi oo lagu joojiyey barnaamijkii Nukliyeerka ee Iran isla markaana wadankaasi looga qaaday cunaqabateyntii dhaqaale ee saarneyd.
Maraykanka ayaa hada cunaqabateyn horleh kusoo rogay ganacsiga Iran iyo waliba ciidamada Jamhuuriga ee dalkaasi, Washington ayaa sidoo kale u hanjabtay dalalka xiriirka ganacsi laleh Iran arrintaasi oo ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan Xukuumada Iran oo ay filayaan in cadaadiskan uu ku khasbi doono inay wadahadal la galaan Trump ama la iska horkeeno shacabka dalkaasi & Dowladooda.